‘नाडा अटो सो २०१९’ विशेष : कसले के प्रदर्शन गर्दैछन् ? | Ratopati
‘नाडा अटो सो २०१९’ विशेष : कसले के प्रदर्शन गर्दैछन् ?
personप्रयास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ५, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौँ । सवारी साधनको कुम्भ मेला ‘नाडा अटो सो २०१९’ को मिति नजिकिएको छ । अबको केही दिनमै राजधानीमा बृहत् र भव्य अटो मेला आयोजना हुँदै छ ।
हरेक वर्ष नेपालीहरुको महान चाड वडा दसैँ र तिहारलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिँदै आएको नाडा अटो सो यस वर्ष यही भाद्र १० गतेदेखि राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुँदै छ । १० गतेदेखि १५ गते सम्म ६ दिन चल्ने उक्त अटो मेलामा नेपालमा उपलब्ध सानादेखि ठूला र सस्तादेखि महँगा गाडी पाइने छ । जहाँ अटो खरिदकर्ताहरुले सहज रूपमा छानी छानी र बार्गेनिङ गरीगरी सवारी साधन किन्न पाउने छन् । त्यसका लागि अटो मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकिएको आयोजक नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालले जनाएको छ ।
यतिखेर नाडा अटो सोको आयोजनाले भन्दा पनि अटो सोमा विशेष के ? भन्ने सवालले सबैको ध्यान तानेको छ । अटो पारखी, उपभोक्ता तथा आम अबलोकनकर्ताहरु यस वर्षको अटो सोमा नयाँ के ? भन्ने विषयमा बेग्र प्रतीक्षामा छन् । कुन कम्पनीले के ल्याउँदै छ ? र कुन कम्पनीले कसरी आफ्नो प्रोडक्ट प्रदर्शन गर्दै छ ? भन्ने विषयलाई बढो कौतुहल र जिज्ञासुका साथ हेरिरहेका छन् ।
यसै जिज्ञासाको पेरिफेरीमा रहेर हामीले यस वर्षको नाडा अटो सो विशेष केही प्रदर्शनीका गाडीहरु कलेक्सन गरेका छौँ । कुन कम्पनीले अटो सोमा आफ्नो उपस्थिति कसरी जनाउँदै छ ? र के कस्तो गाडी उतार्दै छ ? त्यसको प्रारम्भिक जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
आउनुहोस् हेरौँ । ‘नाडा अटो सो २०१९’ मा कसले के प्रदर्शन गर्दै छन् :
यस पटक सुजुकीको नाडा विशेष हाइब्रिड कार बन्ने भएको छ । कम्पनीले मेलामा तीन हाइब्रिड कार एस–क्रस, सिआज र आर्टिका उतार्दै छ । यी कार नै मेलाको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
तर यी तीन इस्मार्ट हाइब्रिड कारहरुमध्ये पनि एस–क्रस नै मेलाको पहिलो रोजाइ बन्ने देखिन्छ । अटो सो टार्गेट गरेर ल्याइएको यो कार मेलामा राम्रै बुकिङ हुने कम्पनीको अपेक्षा छ ।
एस–क्रस हाइब्रिड टेक्नोलोजीमा आधारित नयाँ कार हो । यसलाई क्रस ओभर सेग्मेन्टको विशेष कारका रूपमा लिइन्छ । हाल सुजुकीले ल्याएको एस–क्रस १३ सय सीसी इन्जिन क्षमताको डिजेल कार हो । यसलाई हाइब्रिडको प्रिमियम सेग्मेन्ट कारको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।
एस–क्रस सुजुकीकै एक्सएस–फोको क्रस एक्स सेग्मेन्टबाट उत्पादित कार हो ।
यो कार भारतीय बजारमा सन् २०१५ मा नै सार्वजनिक भएको थियो । तर नेपालमा भने ढिला गरी भर्खर मात्र आएको छ । जुन नाडा अटो सोमा प्रदर्शन गरिँदै छ ।
मूलतः एस–क्रस १.३ डिजेल इन्जिनयुक्त हाइब्रिड प्रिमियम कार हो । यसलाई आरामदायी र फेमिलियर कारका रूपमा लिन सकिन्छ । ५ सिट क्षमतामा उपलब्ध यो कार लामो यात्राका लागि समेत निकै आरामदायी छ । त्यसो त कार हाइब्रिड भएकैले इन्धन बचतमा समेत अब्बल मानिएको छ । एस–क्रसले सरदर प्रतिलिटर २५.१ किलोमिटरसम्मको उच्च माइलेज दिन्छ । जुन यही सेग्मेन्टको अन्य कारहरुले दिँदैन ।
सिआज सुजुकीकै एक नयाँ मोडलको सेडान सेग्मेन्टको हाइब्रिड कार हो । १३ सय सीसी इन्जिन क्षमतामा डिजेल र पेट्रोल दुवै भेरियन्टमा उपलब्ध यो कारलाई पनि कम्पनीले यस वर्षको नाडा अटो सोमा उतार्ने भएको छ । लग्जरियस सेडान सेग्मेन्टको सिआज कार अटो सो विशेष बन्ने कम्पनीले अपेक्षा छ ।
सुजुकीले अर्को नयाँ कार आर्टिकालाई पनि यस वर्षको नाडा अटो सोमा उतार्ने भएको छ । अहिलेसम्मकै सुजुकीको प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा अधिकतम ७ सिट क्षमतामा उपलब्ध यो कार अटो सोको विशेष बन्ने भएको छ । यो कार पनि हाइब्रिट टेक्नोलोजीमा नै आधारित भएर निर्माण गरिएको कार हो ।
१२४८ सीसीदेखि १४०० सीसी इन्जिन क्षमतामा उपलब्ध यो कार म्यानुअल र अटोमेटिक दुवै अप्सनमा छ । यो कार पनि पेट्रोल डिजेल दुवै अप्सनमा उपलब्ध छ भने हाइब्रिड सीएनजीसमेत समाहित छ ।
यस वर्षको नाडा अटो सोमा महिन्द्राले एसयूभी सेग्मेन्टका दुईवटा कार प्रदर्शन गर्ने भएको छ । महिन्द्रा एसयूभी–३०० र मराजो अटो सो विशेष कारहरु बन्ने छन् ।
भारतीय बजारमा सार्वजनिक भएको छोटो समयमा नै आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल यी दुई गाडीले नेपाली बजारमा निकै राम्रो बजार विस्तार गर्ने कम्पनीको अपेक्षा छ ।
महिन्द्राको लेटेस्ट मोडलमा एसयूभी–३०० आएको छ । यो नेपाली बजारमा निकै प्रतीक्षा गरिएको मोडल पनि हो । महिन्द्राले नयाँ प्लाटर्फम ‘एस–१००’ को अवधारणा एसयूभी–३०० लाई बजारमा उतारेको छ ।
यसमा आकर्षक सनरूफको साथै, एलईडी डेटाइम रनिङ लाइट, पुस स्टार्ट–स्टप बटन, टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, डबल जोन क्लाइमेट कन्ट्रोल लगायतका विशेषता उपलब्ध छन् ।
एक्सयूभी ३०० मा ७ वटा फस्टइन सेग्मेन्ट फिचर दिइएको छ । सातवटा एयरब्याग, चारै चक्कामा डिस्क–ब्रेक, १७ इन्च अलोय–ह्विल, ईबीडी तथा एबीएसजस्ता अत्याधुनिक फिचर्सहरुले एसयूभी–३०० विशेष बनेको छ ।
एसयूभी–३०० १.२ लिटर टर्बो पेट्रोल र १.५ लिटर डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध रहेको छ ।
महिन्द्राको निकै चर्चामा रहेको पहिलो एमपीभी मराजो पनि यस वर्षको नाडा अटो सोमा मुख्य आकर्षणका रूपमा रहने छ । सार्क माछाको डिजाइनमा निर्मित मराजो नाडाको विशेष सो हुने कम्पनीको विश्वास छ ।
महिन्द्रा मराजो कम्पनीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो प्यासेन्जर भेइकल हो, जसलाई ७ र ८ सिट अप्सनमा बजारमा उपलब्ध गराइएको छ । मराजोका सबै भेरिएन्टमा एबीएस र ईबीडी तथा ब्रेक असिस्ट, स्टायडर्ड रूपमा दुईवटा एयरब्याग तथा बालमैत्री सिट लगायतका सुरक्षा फिचरहरू उपलब्ध गराइएको छ ।
मराजोमा सनरूफ भेन्ट, सेन्टर कन्सोलमा ठूलो टचस्क्रिन सहितको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, थ्री–स्पोक स्टेयरिङ ह्विल, ब्लुटुथ टेलेफोनिक सिस्टम लगायत क्रुज कन्ट्रोल सिस्टिमका सुविधाहरु उपलब्ध छन् ।
महिन्द्रा मराजोमा १.५ लिटरमा ४ सिलिन्डर डिजेल इन्जिनमा आएको छ ।
टाटा मोटर्सले नाडा अटो सोको अवसर पारेर अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक एवं सुविधासम्पन्न एसयूभी कार ह्यारिअर भित्र्याउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ह्यारिअर नामले परिचित यो कार नेपालमा भने ‘एच फाइभ’ नाममा आउने भएको छ । यो नै टाटाको यस वर्षको नाडा अटो सो विशेष कार हुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ ।
ह्यारिअर गत जनवरी २३ मा मात्र भारतीय बजारमा लन्च गरिएको थियो । टाटाले गत वर्षको अटो एक्सपोमा एच५एक्स कन्सेप्टको रूपमा यो कारलाई पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही कन्सेप्टको अधिकांश भागलाई नै मिलाएर ह्यारियर निर्माण गरिएको छ । कारको डिजाइन आधुनिक छ भने बनोटको तल्लो साइडमा हेडलाइट राखिएको छ । फ्रन्ट ग्रिलमा राखिएको डे टाइम रनिङ लाइटले यसलाई निकै नै आकर्षक बनाएको छ ।
ह्यारिअरमा ईएसपीमा आधारित टेरेन रेस्पोन्स मोड उपलब्ध छ, जसका कारण जस्तोसुकै सडकमा पनि सहज तरिकाले चलाउन सकिन्छ । कारको क्याबिनमा ८.८ इनचको फ्लोटिङ टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम छ । त्यसैगरी ८–वे एड्जस्टेबल ड्राइभर सिट, लेदर अप होल्स्ट्री, क्लाइमेट कन्ट्रोल, ओआरभीएम आदि उपलब्ध छ ।
टाटा ह्यारिअरमा २.० लिटरको फोर सिलिन्डर क्र्याओटेक टर्बो डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ ।
यस पटकको नाडा अटो सोमा हुन्डाईले विशेष नयाँ कारको रूपमा भेन्युलाई उतार्ने भएको छ । कम्पनीले नाडाकै तयारीका रूपमा आज बिहीबार औपचारिक रूपमा भेन्युको लन्च गर्दै छ । १२ सय सीसी इन्जिन क्षमतामा उपलब्ध भेन्यु म्यानुअल अप्सनमा उत्कृष्ट एसयूभी कार हो । उक्त कारमा आधुनिक फिचर्ससहित अतिरिक्त सेवा सुविधामा समेत उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । भेन्यु पहिलो पटक जीडीआई टर्बो पेट्रोल इन्जिनमा आएको छ । जुन भारतीय बजारमा पहिलो डीसीटी अटो कार मानिएको छ । यो कार नै हुन्डाईको नाडा अटो सो विशेष कार हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यस्तै हुन्डाईले नाडा अटो सोमा अर्को कार स्यान्ट्रोलाई प्रदर्शन गर्ने भएको छ । जुन कार बजारमा केही समयअघि नै आएको हो । तर गत वर्षको अटो सोमा प्रदर्शन नगरिएको स्यान्ट्रोललाई यस वर्ष नयाँ सोको रूपमा प्रदर्शन गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
स्यान्ट्रो ११ सय सीसी क्षमताको ह्याजब्याग सेग्मेन्टको कार हो । जसलाई इन्ट्रिलेभलको कार पनि भन्ने गरिन्छ । यो कार पनि यस पटकको अटो मेलाको आकर्षणको कार बन्ने देखिन्छ ।
हुण्डाईले इलेक्ट्रिक कार कोनालाई समेत यस पटकको अटो सोमा विशेष कार बनाउने भएको छ ।
कोना बजारले निकै रुचाएको र उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक कार हो । जुन कार हुन्डाईले हालसालै मात्र नेपाल भित्र्याए हो । यो कारसमेत यस वर्षको नाडा अटो सोमा विशेष गरी प्रदर्शन गरिने भएको छ ।
यस वर्षको नाडा अटो सोमा फोर्डले दुईवटा कार एक्सएलटी अटोमेटिक र इकोस्पोर्टमा थन्डर प्रदर्शन गर्ने भएको छ । यीबाहेक पनि बजारमा चलेका फोर्डका अन्य कारसमेत अटो सोमा प्रदर्शन गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
एक्सएलटी फोर्डको पिकअप सेग्मेन्टको कार हो । यो कारलाई नै फोर्डले यस पटकको नाडा अटो सोमा विशेष कारका रूपमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । एक्सएलटी अटोमेटिक २.३ एल टीआई–भीसीटी आई–फो इन्जिनमा उपलब्ध हुनेछ । यो कार फो ह्विल ड्राइभमा उपलब्ध हुनुका साथै अफ रोड विशेष कारका रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । कम्पनीले नाडा अटो सोमा यो कार विशेष हुने अपेक्षा गरेको छ ।
थन्डर फोर्डको इको–स्पोर्टको नयाँ मोडलको कार हो । यो कार हालसालै मात्र नेपाल भित्र्याइएको छ । यो कारलाई नाडा अटो सो विशेष बनाउने फोर्डको योजना छ ।
१५ सय सीसी इन्जिन क्षमतामा उपलब्ध इको–स्पोर्ट थन्डर निकै आकर्षक र मनमोहक देखिन्छ । ५ सिट क्षमताको थन्डरले अधिकतम २३ किलोमिटरसम्मको माइलेज दिने कम्पनीको दाबी छ ।
निसान र ड्याट्सनका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक पाइनियरस् मोटोकर्पले यस वर्षको नाडा अटोमा टप भेरियन्टका दुईवटा मोडल सार्वजनिक गर्ने भएको छ । निसानको टप भेरियन्टको किक्स र ड्याट्सनको टप भेरियन्टमा ड्याट्सन गो प्लस नै यस वर्ष नाडा विशेष हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
निसानले यस वर्ष टप भेरियन्टमा ‘किक्स’लाई नाडामा उतार्ने भएको छ । बजारमा केही समयअघि नै आइसके पनि यस पटक किक्सको टप भेरियन्ट आउने भएको हो । यो कार टप प्रिमियम अप्सनको कार हो । जुन फो के रियर क्यामेरासहित फो एयर ब्यागमा आउने छ ।
१४ सय ६१ सीसी इन्जिन क्षमतामा आउने यो कार डिजेल र पेट्रोल दुवै अपसनामा आउने कम्पनीले जनाएको छ ।
अन्यमा पहिलेकै र बजारमा आइसकेका प्रोडक्टहरु नै नाडा अटो सोमा प्रदर्शन गरिने कम्पनी जनाएको छ ।
ड्याट्सनले नाडा विशेषमा गो प्लसको टप भेरियन्टलाई उतार्ने भएको छ । पहिले पनि बजारमा गो प्लसको मोडल आइसके पनि अब आउने नयाँ मोडल टप भेरिन्टमा रहेको कम्पनीले बताएको छ । १२ सय सीसी इन्जिन क्षमतामा आउने यो कार इन्ट्री कारमा उत्कृष्ट्र बन्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
माथि उल्लेखित चारपाङ्ग्रे सवारीको मात्र जानकारी हो । यीबाहेक पनि यस वर्षको नाडा अटो सोमा नयाँ ब्रान्ड र मोडलका गाडीहरु पनि प्रदर्शन गरिने छ । बाँकी जानकारी आउने क्रम जारी छ ।
#नाडा अटो सो#गाडी#nada auto show
Aug. 22, 2019, 9:14 p.m. Deepak Shakya
I'm looking for pass
डाबर नेपालले ल्यायो बजारमा इन्स्यान्ट ह्यान्ड स्यानिटाइजर
इतिहासमा आज– यसरी जन्मियो मिकी माउसको कथा
ऋषि कपुर बितेको एक महिना पूराः श्रीमतीले भनिन्, ‘मलाई हिम्मत देऊ किनकी तिमी मबाट सदाका लागि बिदा भइसक्यौ’
नेपाल–भारत सीमामा भारतीयद्वारा सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोस्ने प्रयास